Ahoana ny fomba hahatongavana any Sina?, Sidina, lamasinina ary fomba hafa | Vaovao momba ny dia
Ahoana no ahatongavana any Shina? Sidina, lamasinina ary fomba hafa
Mariela Carril | | Shina, mpitarika, Fitsangatsanganana any Azia
Mandritra ny fotoana fohy izao Sina dia mijanona ho anisan'ny toerana itobiana aziatika lehibe hanao dia tsy hay hadinoina.
Tsena fizahan-tany no mamela ny fitsangatsanganana sy ny fitsangatsanganana irery, fa rehefa mijery ny sarintany isika dia mahita firenena midadasika sy lavitra. Tsy azo tratrarina? Tsisy fika! Inona koa, Tsy vitan'ny hoe tonga amin'ny fiaramanidina ...
1 Fahatongavana any Shina amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo iraisam-pirenena
2 Tonga any Sina amin'ny fiaramanidina
3 Midira an-tanety any Sina
Fahatongavana any Shina amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo iraisam-pirenena
Eny, safidy iray anananao izany raha miditra amin'ny fitsidihana fahafinaretana ianao ary iray amin'ireo nofinidin'ny vondron'ireo mpandeha mihoatra ny 50 taona.
Tonga ao amin'ny seranan-tsambon'i Tianjin ny sambo fitsangantsanganana iraisam-pirenena misy ny toeran'i Beijing avy any amin'ny faritra atsimo atsinanan'i Azia ary mazava ho azy, avy any Hong Kong ihany koa. Taorian'ny Shanghai sy ny renivohitra, Jin araka ny lazain'izy ireo matetika amin'ity tanàna ity, dia tanàna manaitra izay manana ny fananany ho an'ny mpizahatany.
Trano fanjanahan-tany amin'ny fomba isan-karazany, ao anatin'izany ny eropeana, toerana mahaliana ara-tantara izay an-jatony maro raha tsy an'arivony taona maro (misy ny làlan'ny Great Wall, ny Huangyaguan Pass, eo akaiky eo), sy ny gastronomic matsiro sy manankarena.
Ny orinasa Royal Karaiba misy fitsangantsanganana mitsidika an'i Tianjin. ny ny anton'ny tehaka mirefodrefotra of ny ranomasina, ohatra. Misy fitsangantsanganana an-tsambo izay miainga avy any Hong Kong na koa misy fitsangatsanganana mahatafiditra toerana any Japon.
Tena tsara ny fanaovan'ity orinasa ity fa ilay mpilalao sarimihetsika sinoa malaza Fan Bingbing no reniben'ity sambo ity, ny sambo lehibe farany amin'ny sambo. Raha sambo no tianao fa tsy fiaramanidina dia jereo ny tolotra omen'izy ireo satria afaka mitety an'ity faritra ity ianao (ao anatin'izany Korea Atsimo, Vietnam ary Japon), amin'ny sambo faran'izay lafo vidy.
Tonga any Sina amin'ny fiaramanidina
Io no safidy be mpampiasa indrindra ary ny vavahady fidirana dia matetika Beijing na Hong Kong. Mazava ho azy fa i Shanghai ihany koa rehefa tonga amin'ny firenena tandrefana.
Avy eo anelanelan'ny «varavarana ireo»Angamba ny safidy tsara indrindra dia ny Hong Kong satria mora kokoa matetika ary manana visa lava kokoa. Inona koa, tsara toerana izy io mifandraika amin'ny toerana itodiana backpacker mahazatra, ankoatr'izay dia tena mahaliana izy ary manome karazana acclimatization an'i Shina amin'ny ankapobeny.
Midira an-tanety any Sina
Raha efa mitety faritra amin'ity tany ity ianao afaka manatona an-tanety ianao ary manao ny fiampitana sisintany amin'ny toerana maro ho an'i Shina dia firenena lehibe midadasika.
Avy any Pakistan ianao dia afaka miampita amin'ny làlambe Karakoram ary mandroso Kashgar, any amin'ny faritanin'i Xinjiang. Mety tsy izany no toerana tsara indrindra raha jerena ny zava-misy any Pakistan sy ireo olana ara-politika misy an'i Shina eto miaraka amin'ireo Silamo vitsy an'isa.
Avy any Laos ianao dia afaka mamakivaky an'i Boten mankany Mengla, any amin'ny faritanin'i Yunnan. Avy any Nepal ho an'ny TibetMazava ho azy, na dia tadidiny aza ny olana momba ny visa sy fahazoan-dàlana manokana. Avy any Vietnam misy safidy telo samy hafa:
ho an'ny làlana fisakaizana any Nanjing
avy any Lao Cai ka hatrany Kumning
avy any Mong Cai ka hatrany Dongxing
Ny fiampitana mora indrindra no voalohany Satria afaka mandeha bus alina mankany Dong Dang ianao ary avy eo mandoa moto handehanana kilometatra vitsivitsy mankany amin'ny Friendship Pass, ny Youyi Guan amin'ny teny sinoa o Huu Nghị Quan amin'ny Vietnamese.
Misokatra amin'ny 7 maraina ny sisintany, Hatramin'ny 4 hariva. Raha vao eo amin'ny lafiny sinoa ianao dia mizotra amin'ny arabe mankamin'ny arabe lehibe ary miandry ny bisy mankany Pinxiang, 10 kilometatra miala anao, avy eo izay ahafahanao mitaingina fiara fitateram-bahoaka mahazatra mankany Nanning. Ary avy eo Guilin dia mitaingina bus indray iray alina ...
Safidy iray hafa ny maka ny lamasinina iraisam-pirenena avy any Hanoi. Miala in-droa isan-kerinandro izy, ny talata sy zoma amin'ny 2 ora hariva ary tonga any Beijing roa andro taty aoriana amin'ny 5 hariva. Tonga ao Pianxing amin'ny misasakalina, Nanning amin'ny 8:40 maraina ary Guilin amin'ny 7:20 hariva. Izany dia tsotra kokoa nefa lafo kokoa, Eny tokoa.
Amin'ny safidy faharoa, mandeha lamasinina alina any an-toerana mankany Lao Cai ianao, miampita ny sisin-tany ary mitaingina lamasinina na bus indray avy eo Kunming mankany Hekou. Fiaran-dalamby iray alina ihany koa no mandeha eto indroa isan-kerinandro, ny zoma sy alahady, avy any Hanoi. Miala amin'ny 9 ora sy sasany hariva ity serivisy ity ary tonga ao amin'ny Station Kunming North amin'ny 30:7 maraina.
Raha miresaka momba ny fiaran-dalamby ny malaza sy tsara tarehy Fiaran-dalamby Trans-Siberia na Trans-Mongoliana safidy ihany koa io. Raha toa ianao ka en Kazakhstana afaka miampita avy any Almaty mankany Urumqi o Yining, ary raha efa ao anatin'ny faritry ny sinoa ianao, any Hong Kong sy Macao, satria tsotra kokoa ny fiampitana sisintany ary efa akaiky.
Araka ny hitanao tamin'ny safidy Ny fiampitana sisintany teo anelanelan'ny Sina sy ny mpifanila vodirindrina aminy dia amin'ny alàlan'ny làlambe na lamasinina toy izany be ny bisy tonga izany dia mandeha koa.
Avy any atsinanana dia afaka mahatratra ny firenena ianao fiampitana sisintany roa miaraka amin'i Vietnam ary koa avy any Myanmar sy avy any Laos. Avy any Pakistan dia efa nilaza izany isika, amin'ny alàlan'ny Karakoram Pass ary avy any Nepal amin'ny alàlan'ny El Tibet.
Tadidio fa tsy misy ny fiampitana sisintany eo anelanelan'i Sina sy India izay misokatra Eny, ny fifandraisana politika dia tsy amin'ny fotoana tena tsara. Hatramin'izao dia miresaka momba ny fiara fitateram-bahoaka foana isika na andro na alina, fa ... Afaka mitondra fiara ve ianao?
Ny marina dia ny hevitra ankapobeny dia manasongadina ny zava-misy fa somary mampidi-doza io ary mamitaka mandeha any Shina amin'ny fiara raha vahiny ianao ary tsy manana baikon'ny fiteny. Manodidina izany dia tsy miteny anglisy ny olona ary mety hahatonga ny olona hahatakatra fa mety ho helo.
Ankoatr'izay, ny fidirana tsara indrindra hatao amin'ny fiara dia amin'ny alàlan'ny El Tibet, toerana mangatsiaka be saika mandritra ny taona. Mbola mahatsapa izany ve ianao? Dia tokony ho fantatrao avy any Nepal ianao dia afaka mitaingina fiara amin'ny sisin-tany Kodari ary Zhang mu, miaraka amin'ny faharetana mazava ho azy, taratasy izany.
Azonao atao koa ny miditra amin'ny fiara avy any Myanmar. Izany rehetra izany dia misy amin'ny visa milamina sy ny taratasin'ny fiara. ny fahazoan-dàlana hamily fiara avy amin'ny firenenao, ny fahazoan-dàlana vonjimaika navoakan'ny governemanta sinoa sy ny fahazoan-dàlana iraisam-pirenena, raha toa ka.
Mila mitadidy izany ianao Na dia afaka mitondra fiara any Shina aza ianao dia tsy maintsy ampahafantarinao mialoha ny dianao. Any Sina, teratany vahiny ihany no afaka mandeha amin'ny lalana sasany ka raha izany no drafitrao dia alao antoka fa ny fampahalalana rehetra ao amin'ny ambasady.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Shina » Ahoana no ahatongavana any Shina? Sidina, lamasinina ary fomba hafa
Luis rene dia hoy izy:
namako, afaka mankany Chine ve ianao? Liana aho hahafantatra toro-hevitra sy zavatra, te handeha aho!
Mamaly an'i luis rene
Guatapé, tanàna maro loko indrindra any Amerika Latina